Albinism pageant in Zimbabwe joyfully breaks down prejudice - cnbctv18.com
Updated : 2019-05-25 20:42:53
About 70,000 of Zimbabwe's estimated 1.6 crore people are born with albinism, according to government figures. They often stand out, making them a subject of discrimination and ridicule. The Mr and Miss Albinism Zimbabwe competition, now in its second year, is a chance to push back.
Ayanda Sibanda smiles, after being crowned Miss Albinism Zimbabwe 2019 at an albino pageant held in Harare. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Edson Mambinge, centre, is crowned Mr Albinism Zimbabwe 2019 at an albino pageant held in Harare. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
About 70,000 of Zimbabwe’s estimated 1.6 crore people are born with albinism. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
People who are born with albinism are often subjected to discrimination and ridicule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Contestants are seen during rehearsals for the Miss Albinism Zimbabwe 2019. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Contestants wait to go on stage during the Mr and Miss Zimbabwe Albinism pageant. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A contestant combs his hair backstage before a Mr and Miss Zimbabwe Albinism pageant. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A contestant walks on stage, during the Mr and Miss Zimbabwe Albinism pageant. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)